Akụkọ - Nrọ 2018 | Youxing Shark si nnukwu-ọnụ ọgụgụ Chinese New Year nzukọ kwa afọ ga-amụnye Shanghai na oge ntoju obodo ahụ dum!
Nrọ 2018 | Youxing Shark si nnukwu-ọnụ ọgụgụ Chinese New Year nzukọ kwa afọ ga-amụnye Shanghai na oge ntoju obodo ahụ dum!
Onye ikpe ahụ gbadoro ụkwụ site n'aka onye mmekọ Youxing Shark, Shanghai Zhiwol Marketing Management Co., Ltd.
Na-ele anya na nnụnụ na-enweghị nsọtụ na mbara igwe, na-ele anya na Phoenix, na-ele ugwu, na-ele ọnwa anya ma laghachi na ụwa. Achọrọ m ịchọta ụzọ m site na okooko osisi ma banye n'ime igwe ojii ọcha, na-egosi ịdị ebube nke elu igwe.
Na Jenụwarị 16, 2018, “Iwuli Nrọ 2018” Youxing Shark’s big-scale Chinese New Year meeting was grandly meghere na Shanghai! Ndị na-ere ahịa shark Elite sitere na mba niile gbakọtara na Shanghai, ihe karịrị otu narị mmadụ gbakọkwara na isi anwansi. Ike nke ike si n'akụkụ niile wee bịa, na-agbakwunye Shanghai nke ejiji na nrọ.
Otuto, Ọla Puru n’Ọwụwa Anyanwụ; Huanghuangxi, obodo nke uwa. Enwere nrọ nrọ nke shark 2018, na-eto eto na-ama mma na isi obodo!
Nzukọ a na-enwe kwa afọ malitere n’oge n’oge n’elekere mbụ nke ehihie. Dị isiokwu dị iche iche na-ewu ewu na-ewu ewu na ọdịnaya n'okpuru atụmatụ okike nke onye ahịa Zhiwolf ahịa nke Youxing Shark mere ka ndị ahịa niile nwee ọ excitedụ ma nwee obi ụtọ. Nzukọ azụmahịa nke 6, ndị na-ere ahịa na-atụ ụjọ mgbe niile ma na-elekwasị anya, Beaa ntị, na-ekwu okwu ike, na-ekere òkè na mkparịta ụka, na achọghị ịhapụ nkọwa ọ bụla.
Oriakụ Fang Zhenying, onye isi njikwa gị Youxing Shark, kwuru okwu mmeghe maka nzukọ a. N’ikwu okwu banyere “Ebumnuche Nwube 2018”, Maazị Fang ji ọ excitedụ kwupụta na nrọ nke Youxing Shark 2018 bụ ka ọ bụrụ akara ngosi na ụlọ ọrụ kemịkal kemịkal kemịkalụ, a ga-edepụta ya nke ọma na bọọdụ isi na 2022; ọ bụ inwe ike isoro ndị nkesa niile nwee obi ụtọ ogologo oge ma hapụ nkesa Ndị ahịa ga-enweta ọgaranya nloghachi; ọ bụ ikwe ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ weghachite ụgwọ ọrụ ihe onwunwe ma nweta obi ụtọ na obi ụtọ nke ụlọ n'elu ikpo okwu nke Youxing Shark. Youxing Shark ga-emezu ihe niile ọ bụla, jiri nwayọ ma jiri nwayọ mezuo ebumnuche ọ bụla, kpokọta usoro iji ruo ọtụtụ puku kilomita, kpokọta obere iyi, ma jikọta osimiri, na n'ikpeazụ mezuo nnukwu nrọ nke Youxing Shark!
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu na nchedo gburugburu ebe obibi ka dị na usoro okwu tupu 2015, ọ banyere na-aga n'ihu nwayọ nwayọ na 2016. Na 2017, nchekwa gburugburu ebe obibi abanyela n'okporo ụzọ ngwa ngwa. N'akụkụ a, Zhu Shengjie, onye osote onye ntụzi aka nke Youxing Shark na Fang Haiyan, onye njikwa na-azụ ahịa gosipụtara n'ebe ahụ "Uru nke sharks ụlọ ọrụ ahụ ma e jiri ya tụnyere ntozu nchekwa gburugburu ebe obibi nke otu ụlọ ọrụ ahụ". Ntụle nke ndị ọkachamara na ikike ikike gburugburu ebe obibi ruru eru gosipụtara na asọmpi gburugburu ebe obibi na-asọ mpi nke ụlọ ọrụ ahụ Uru ya na-eme ka ndị ahịa niile na-eweta oke ọ excitedụ ma na-awụ akpata oyi n'ahụ, ha nwekwara ntụkwasị obi na ogologo oge mmepe nke Youxing Shark n'ọdịnihu!
N'elu ikpo okwu di egwu nke Youxing Shark, enwere otutu nrọ ichoro anya, n'ihi na olile anya gha emezu. Banyere atụmatụ na atụmatụ mmepe siri ike maka afọ 5 sochirinụ, Fang Zhenying, onye isi njikwa Youxing Shark siri ike ma nwee ntụkwasị obi. Ebumnuche bụ ibute ụzọ na mkpuchi ọhụrụ laminated board, nke ọhụrụ polyurethane sealant, yana ọhụụ na-acha ọcha gburugburu ebe obibi iji mepụta nke mbụ. New gburugburu ebe obibi enyi na enyi mmiri mmiri kee mbụ! Banyere ohere na atụmanya nke ndị na-ere ahịa iji nweta ego n'ọdịnihu, Fang Zhenying, onye isi njikwa nke Shark, kwuru na ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ dị elu, ndị na-akwụ ụgwọ dị ala, depụtara ntụkwasị obi akara, mmelite na-aga n'ihu nke sistemụ mmepe nkwado na mmepe siri ike. atụmanya nke otu narị afọ ruru eru bụ ihe niile Ọ tọrọ ntọala siri ike maka mmepe nke ndị na-ere ahịa Shark na-arụ ọrụ n'ọdịnihu na arụmọrụ ọsọ ọsọ.
Ọdịnihu dị nnukwu, na ebumnuche ya siri ike. Youxing Shark rịgoro na isi nkuku nke okpukpu abụọ nke uru ya na 2017 megide omume ahụ wee gbasaa usoro mmalite ọhụụ nke 2018.
Youxing Shark na-etinye uche dị ukwuu na uto arụmọrụ na uto ego nke ndị ahịa ọ bụla na ndị ọrụ ọ bụla. N'akụkụ a, Gong Yongjun, onye isi na onye isi njikwa azụmaahịa nke Youxing Shark, wepụtara n'ụzọ na-eju anya "Nyochaa 2017, Na-atụ Anya Na 2018", na-enyocha ma na-egosi "arụmọrụ na uto ego okpukpu abụọ nke ụlọ ọrụ, ndị na-ekesa ya, na ndị ọrụ" n'ụdị nke usoro ihe omuma zuru oke. Ngwurugwu, mgbanwe doro anya ma dị nkọ, dị ka ndetu ederede, na-ada opi ike nke nrọ ụlọ 2018! Ekpughewo nnukwu atụmatụ nke shark, ma nke a abụghị ịbịaru achicha iji mejuo agụụ gị na ikwu okwu na akwụkwọ. Banyere mmezu nke ebumnuche ahụ, Gong Onye isi njikwa kwuru na Youxing Shark ga-eme ike ọ bụla iji wulite ike nkesa na ndị ahịa na-ere ahịa nde afọ, ma ga-ekpebikwa ike ịrụ ezigbo ọrụ na "ọrụ" kachasị na Nkwado ", ma kpebisie ike ịmekọrịta atụmatụ mmekọrịta akụ na ụba na nkesa" akụ na ụba "na" ahịa "Atụmatụ iwughachi azụmaahịa ahụ, amụma na-akwụghachi ụgwọ maka ndị na-ere ahịa, yana atụmatụ atụmatụ anọ nke ụlọ ọrụ Shark China ga-enyere ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ shark aka. ime mmali! Ndị ọkaibe na ndị ọrụ nke shark ụlọ ọrụ na-atụ ụjọ mgbe niile, na-elekwasị anya, na-etinye uche, ma na-anụ ọkụ n'obi. , Ekpebisiri ike ịgazu ihe niile maka nrọ nke 2018 wee jide ebe mbụ n'ahịa!